Ndeipi maindasitiri 3D printer yekutenga | hardware yemahara
La chirungiso kugadzira yave imwe yezvinhu zvinovimbisa zvakanyanya muindasitiri yeindasitiri. Mhando iyi yekugadzira inogona kuwana zvikamu zvine maitiro angadai asingagoneki, anodhura zvakanyanya, kana akaoma kugadzira. Naizvozvo, zviri kuramba zvichidikanwa kuve neindasitiri ye3D printer mune mamwe masangano. Tichifunga zvakanakira uye kukwikwidza izvo zvinogona kuita kuti iwe ukunde, haisi mari, asi mari huru inozodarika kubhadharwa.
QIDI TECH X-Plus... Ona maficha Ona kupiwa
Saizi hombe 3D printer... Ona maficha Ona kupiwa
ENET 59Ncm Nema 17 Motokari... Ona maficha Ona kupiwa
QIDI TECH uye nekukurumidza ... Ona maficha Ona kupiwa
Zvakanakisa	QIDI TECH X-Plus...
Unhu hwemutengo	Saizi hombe 3D printer...
Chatinoda	ENET 59Ncm Nema 17 Motokari...
QIDI TECH uye nekukurumidza ...
1 Iwo gumi nemaviri Akanakisa Maindasitiri e12D Printer
1.7 XYZprinting Da Vinci Ruvara
1.10 FlashForge Musiki 4
1.13 Mamwe maprinta egiredhi reindasitiri
2 Kutenga gwara
Iwo gumi nemaviri Akanakisa Maindasitiri e12D Printer
Kana iwe uine bhizinesi uye uchida kuwana indasitiri 3D printer, heino iwe 12 yemhando dzakanakisa dzaunogona kuwana, ine maitiro akasiyana uye mutengo wemhando:
FlashForge ndeimwe yemichina yakanakisa muchikamu ichi, ine mutsara wakanangana nekushandiswa kwemaindasitiri, senge Guider IIS kana 2S. Hunouya ne kamera yekutarisa kure, chidzitiro chine sefa, 5-inch touch screen, yakashandiswa filament yekuona system, kudhinda vhoriyamu ye28x25x30 cm, sisitimu yekutanga kudhinda kana simba ratadza, nezvimwe. Saizvozvo, unogona kushandisa PLA, ABS, Flex filaments, conductive filament, nezvimwe.
Kuburikidza negore uchakwanisa kudzora printer iyi ye3D, pamusoro pekuona basa rauri kuita kuburikidza nekamera. Yakachengeteka, sezvo ine feni ine sefa kudzivirira huruva inogona kugadzirwa panguva yekudhinda. Uye inogona kubatanidzwa kuburikidza ne USB tambo, pamwe nekutsigira kudhinda kubva ku USB flash drive, uye WiFi network yekubatanidza. Kurongeka ndiko ± 0.2mm, uye ine kumhanya kwakanaka kwekudhinda.
Iyi inotevera modhi yakabva kuCreatBot, imwe inozivikanwa inonyanyozivikanwa yekugadzira femu uye ine mutengo unonakidza. Printer iyi inogona kushanda nayo advanced filaments sePEEK uye mamwe maitiro epamusoro izvo zvinoda tembiricha yakakwira extrusion (kusvika ku420ºC). Iwe unogona zvakare kudhinda paPC, naironi, PP, ABS, nezvimwe.
Ine hurongwa tangazve kana simba rakundikana, kaviri extrusion nozzle, pamwe neatomatiki kuenzanisa uye kugadzirisa, nezvimwe. Muchina wakanakisa wekugadzira engineering, hutano hwehutano, mota, kana aerospace maindasitiri zvikamu. Nekukwanisa kwekugadzira zvidimbu zvakakura.
JFF zvakare ine maindasitiri giredhi modhi. Iyo iprinta yepamusoro-vhoriyamu, kugona dhinda zvimedu kusvika 30 × 22.5 × 38 cm. Iyo yakanyarara, ine sipidhi yakanaka, uye yakanyatsojeka. Yakagadzirwawo ichiichengeta yakagadzikana uye yakasimba, ine dhizaini yemhando, uye kudzivirira kuzunguzika kubva pakukanganisa maitiro.
Iine kabhoni silicon girazi chikuva, inokwanisa kugadzira 0.1 mm maseru, yakakwirira-inoshanda deposition chimiro, yakakwirira-simba fan, yakapusa mushandisi interface pane yayo 4.3 ″ touch screen, inoshanda nesimba, uye yakavakirwa pa FDM tekinoroji yekudhinda paPLA neABS. Inotsigirawo kudhinda pamhepo kana kubva kuSD kadhi, muSTL, OBJ uye AMF mafomati. Inoenderana neCreality Slicer, Cura, Rpetier, uye Simplify3D, pamwe neWindows, macOS, uye Linux.
Kloner3D zvakare ine iyi inonakidza printer yaunogona kushandisa mairi Linux, Windows uye macOS masisitimu anoshanda, nerutsigiro rwemafaira ane 3D modhi muG-code, OBJ uye STL. Iyo compact uye yakareruka, uye yakavakirwa paFFF tekinoroji yekugadzira zvikamu zvinosvika 14x13x12 cm, ine dhizaini makobvu e0.05 mm chete, uye XYZ resolution ye0.01 mm.
Inogamuchira 1.75mm filament, ine imwechete 0.5mm extruder nozzle. inogona kudhinda zvakasiyana-siyana zvinhuzvakadai sePLA, ABS, PCABS, NYLON, PET-G, PVA, PET, TPE, TPU, HIPs, Laywood, Architectural, Carbonium, PMMA, ASA uye Laybrick, PLA, ABS, PVA, PET, TPE, TPU, Laywood uye Laybrick.
Iyi indasitiri ye3D printer, sekureva kwezita rayo, inomira kunze kwekumhanya kwayo. Inoshandisa kaviri Z axis kugadzirisa mhedzisiro, kusvika inomhanya kusvika ku100cm3/h, kupera kwakatsetseka, uye FDM tekinoroji yekubata nezvinhu zvakaita sePLA, PLA+, ABS, PET-G, naironi, PVA (inonyungudika mumvura), nezvimwe.
Nezve saizi yekudhinda, inokutendera iwe kugadzira zvidimbu kusvika 33x25x32 cm, uye ine yakanyanya tembiricha yekudziya system. Pamusoro pezvo, ine kukurumidza kudzidza curve, sezvo iine yakapusa uye ine hushamwari mushandisi interface. Nemamodhi maviri ekusarudza: yakajairika modhi uye nyanzvi maitiro.
Imwe FlashForge inopinda iyi runyorwa rweakanakisa maindasitiri 3D maprinta. With a high tembiricha system, inobatsira kuyera, yakashandiswa filament sensor, smart mounts, 5 ″ touchscreen ine mushandisi-inoshamwaridzika interface, yakagadzirirwa kushanda kwakanyarara, uye hukuru hukuru.
Kana zviri zvimwe zvese, inogona kusvika 240ºC muextruder, uye 120ºC pamubhedha, inokodzera PLA, ABS, TPU, uye PET-G filaments, ine dhinda vhoriyamu ye28x25x30 cm, resolution ye ±0.2 mamirimita, 8GB yekuchengetedza mukati, USB kubatana, WiFi, Ethernet, uye kudhinda kubva kuSD. Inosanganisira FlashPrint uye FlashCloud uye PolarCloud software.
XYZprinting Da Vinci Ruvara
XYZ Kudhinda da Vinci...
XYZprinting da Vinci Ruvara ndeye 3D printer chimwe chinhu chakakosha. midziyo iyi inogona shanda nezvinhu zvakaita sePET-G, PLA, nezvimwe. Layer ukobvu ndeye 0.1mm kuti uwane yakatsetseka uye yemhando mhedzisiro. Nozzle yayo ndeye 0.4 mm, uye inogamuchira 1.75mm filaments.
Iyo ine 5 ″ LCD skrini, inoenderana neWindows inoshanda masisitimu, uye sisitimu yekudhinda pa mavara akasiyana.
Imwe nzira, zvakare kubva kuFlashForge, iyi Inventor modhi. Zviri zvakachipa, ye teleworking kana processionals ine madiki studio. Printer iyi inotsigira 1.75mm filaments, ine zvinhu zvakaita seABS, PLA, PVA, nezvimwe. Mhedzisiro yacho yakanaka uye yakananga, ine mbiri extruder, uye inokwanisa kugadzira mamodheru kusvika 22x15x15 cm.
Inosanganisira imwe mushandisi-inoshamwaridzika yekubata sikirini, uye yakabatanidzwa webcam kurekodha mavhidhiyo ekuita kana kutarisa pamhepo. Inobvumirawo kudhinda kubva kuSD memori kadhi kwaunenge uine mamodheru, inobatanidza kuburikidza ne USB, uye inogona kushanda pane network nekuda kweWiFi. Iyo inouya mumitauro yakawanda uye inogoneka kunyangwe iwe usina ruzivo.
Bresser T-Rex - Printer...
Kambani yeGerman Bresser yakagadzirawo imwe yeakanakisa compact saizi magiredhi giredhi anodhinda. Inobva pane mbiri extruder FFF tekinoroji, uye yakavandudza kutonhora, kuenzana kuri nyore, kugadziridzwa kwekamuri yekumanikidza, 8.9 cm LCD yekubata skrini ine inokurumidza uye nyore interface, WiFi yekubatanidza, nezvimwe.
Inogona kushivirira 1.75mm PLA uye ABS mhando filaments, ichikwanisa kugadzira mhando kusvika 22.7 × 14.8 × 15 cm. Chimiro chayo chakasimba uye chinogara kwenguva refu, ine printing chaiyo ye0,1-0,2 mm, USB connection, SD card slot, spatula influences uye 2 kg yemafilaments sechipo, ine layer thickness pakati pe0.05 ne0.5 mm, 0.4 mm nozzle, mbezo chaiyo uye inotsigira REXPrint software uye STL mafaira.
FlashForge Musiki 4
Tenga FFCreator 4
Iyo FlashForge Musiki 4 ndeimwe yeakanakisa maprinta zvekushandisa zvehunyanzvi. Nekukwanisa kudhinda nekumhanya kwakanyanya uye nekururama kwe ± 0,2mm kana 0.002mm/mm, yakakura kuvaka mavhoriyamu anosvika 40x35x50cm, layer urefu: 0.025-0,4mm, kumhanya kwekudhinda: 10-200mm/s sekugadziriswa, yakananga drive mhando yakazvimirira mbiri. extrusion INDEX system, 0.4mm nozzle (inobvumawo 0.6 uye 0.8mm).
Inotsigira akawanda marudzi emafaira, akadai 3MF, STL, OBJ, FPP, BMP, PNG, JPG, pamwe neFlashPrint software, uye ine hombe 7-inch skrini. Kubatana kunouya kuburikidza ne USB, kana Ethernet tambo kana WiFi kune network. Zvinhu zvinogamuchirwa ndezve TPU, PLA, PVA, PETG, 98A TPU, ABS, PP, PA,
PC, PA12-CF, uye PET-CF.
Tenga Totus Tech DLP
Zvinotevera zvinobva kuJiangsu Totus Technology Company, kambani yekuChina yapinda muindasitiri yekudhinda ye3D ine vatengi vanogutsikana. Printer iyi ine DLP tekinoroji, uye inobvumira basa muzvikamu zvakaita sezvishongo, kugadzira matoyi, mazino, uye mamwe maindasitiri emaindasitiri anoda chaiwo zvinhu, uye yemhando yepamusoro uye nemazvo. Inodhinda nekumhanya kukuru, uye inovakwa kuti igare.
Tenga Uniz Slash
Iwe zvakare une sarudzo yeiyi Uniz Slash, imwe huru maindasitiri 3D printer ine STL LCD tekinoroji, kugadzira zvinhu zvinosvika 19.2x12x40 cm, yakakwirira kwazvo. kunyatsojeka nekusiyana kwemakroni mashoma, hutete hwakatetepa hutete, kumhanya kunosvika 200 mm/h, otomatiki yekuyera sisitimu, mhando uye zvinhu zvinogara, uye USB, WiFi uye Ethernet yekubatanidza.
Inobvumirawo kutonga kuburikidza nemaapuro emafoni efoni iOS/iPadOS uye Android. Ehe, inoenderana neWindows uye macOS, uye inotsigira STL, OBJ, AMF, 3MF, SLC, uye UNIZ mafomati. Pamusoro pezvo, inotsigira mhando dzinorema kwazvo, dzinosvika kupfuura 1 GB muhukuru.
Mamwe maprinta egiredhi reindasitiri
Pamusoro pezviri pamusoro, kune zvakare mamwe maindasitiri e3D maprinta anogona kuenda kubva € 10.000 kusvika € 100.000 mune zvimwe zviitiko. Aya marudzi emaprinta akanangana nemakambani makuru kana ane zvakakosha zvakanyanya. Nekudaro, hazvitengeswe kuburikidza nezvitoro, asi iwe unofanirwa kubata sevhisi sevhisi, vatengesi munharaunda, kana mumiriri wekutengesa kwefemu.
Zvimwe zve zvinokurudzirwa zverudzi urwu ndezvi:
Additec µPrinter: muchina weindasitiri wekudhinda 3D zvikamu musimbi. Iyo inoshandisa tekinoroji yeDED (Yakanangana Nesimba Deposition) kana LMD (Laser Metal Deposition). Inoshandisa simbi filament kana waya kubva 0.6 kusvika 1 mm muhupamhi uye inogona zvakare kushandisa simbi hupfu kana ichida. Iyo ine katatu laser ye200W imwe neimwe, uye kuti iwane zvakanakisa mhedzisiro, ine inoshingairira yakachengetedzwa tembiricha system. Yayo-yakavakirwa-mukati kamera inobvumira kure kure kutarisa kwemaitiro ekugadzira kana kurekodha kwekupfuura-nguva.
Triditive AMCELL: kambani yeSpanish, yakavakirwa muAsturias, uye yakazvimisa pakati pezvakanakisa pasirese maererano nemaindasitiri-giredhi 3D maprinta. Muchina wakakwana, wakanyatsorongeka, uye wakanyatsoshongedzerwa maererano nemabasa uye tekinoroji. Mukuwedzera, iwe uchakwanisa kudhinda pane nhamba huru yezvinhu, kubva kuma polymers akadai ABS, ASA, CPE, HIPS, IGLIDUR I150, kunyange maumbirwo akadai se PA+ARAMID, PA+CF, PC+ABS, PC+PBT, uyewo masimbi akaita sesimbi SS 316 uye SS 17-4 PH, Inconel (Ni-Cr), uye Titanium.
HP MultiJet Fusion: Ehe, mugadziri weAmerica HP anewo 3D maprinta echikamu chebhizinesi, senge michina yekuwedzera yekugadzira ine MJF tekinoroji. Uye zvakare, kuti uwane zvakanakisa mhedzisiro, zvinokutendera iwe kudzora yega voxel.
EVEMET 200 kudengenyeka kwenyika: Kambani iyi yekuItaly yakakwanisawo kugadzira maindasitiri mahombe ekudhinda 3D michina yakavakirwa palaser tekinoroji, yekugadzira zvinhu zvakawanda, zvinosanganisira zvishongo zvakadhindwa, kana yebazi rezvehutano hwemazino. Panyaya yeEVEMET 200 modhi, inobvumira kudhinda pazvinhu zvesimbi zvakaita sealuminium alloys, Co-Cr, nickel alloys, simbi, titanium uye zvakare simbi dzinokosha (goridhe, sirivheri, platinamu).
Xerox ElemX: maindasitiri giredhi liquid simbi printer. Imwe yemichina mikuru ine maapplication zvakare mune mamwe minda senge mushonga, aeronautics uye aerospace, mauto, nezvimwe. Muchiitiko ichi, inobvumira kugadzira zvimwe zvimedu mune yakanyanya kujeka aluminium alloys.
Kana iwe uchiri kusava nechokwadi kuti ndeipi yekusarudza kubva pane iri pamusoro apa, ndinokupa zano kuti uverenge mutungamiri wedu pa nzira yekusarudza indasitiri ye3d printer. Izvi zvinobvisa kusahadzika kwakawanda uye uchakwanisa kusarudza iyo inonyatsokodzera kambani.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Mahara emahara » 3D kudhinda » Ndeipi maindasitiri 3D printer yekutenga
Ndeipi 3D printer yekutenga kumba